Fitiavana amin'ny faniriana ara-nofo Ny fototra amam-pitiavana, firaisana ary ny Internet
Home fifandraisana Fitiavana toy ny faniriana ara-nofo
Ny faniriana hanao firaisana ara-nofo, ny fiara manoloana ny firaisana ara-nofo, ny filaharam-batana na ny fahatsapana 'faniriana,' dia valisoa voajanahary, na fiankinan-doha, tarihin'ny neurochemical dopamine. Amin'izao lafiny izao, dopamine dia manentana ny 'anticipation' ny valisoa, ny faniriana ary ny faniriana. Ny asany lehibe indrindra dia ny hamporisika antsika hanan-janaka, na te-hanan-janaka isika na tsia, rehefa maneho fitiavana isika.
Ny natiora dia manana fandaharam-potoana tena mazava sy mahery vaika - mba ahafahan'ireo jeneraly ho an'ny taranaka manaraka. Mivoatra amin'ny karazana herisetra izy io. Ny anton'izany dia ny fanamafisana ny dobo fotsy. Ny famindrana dia miteraka fahavoazana ara-pahasalamana sy olana ara-pahasalamana. Olana eo amin'ny kolontsaina maro ny fanambadiana ny zanak'olo-mpiray tam-po voalohany. Ny fananana karazana vary dia midika fa raha misy aretina mitaiza na areti-mifindra hafa eo amin'ny fiainana, dia misy ny fahafahan'ny olona sasany hanana fifangaroan'ny fototarazo izay ahafahan'izy ireo miaina.
Ny orgasme, ny fahatsapana fatratra ny fahafinaretana ho an'ny maro dia ny tanjon'ny hetsika ara-pananahana, mametraka ny cascade ny neurochemicals, opioids, izay iainantsika amin'ny maha-euphorie antsika. Amin'io fotoana io, ny dopamine dia mijanona ao anaty lamandy. Ny sisa tavela dia averina indray ao amin'ny rafitra efa vonona ho amin'ny fotoana manaraka hampitaovana antsika ho tanjona velona, ​​izay efa tratrarina ankehitriny.
Ny faniriana hahatsapa ny fahatsapana fahafinaretana goavana dia manosika antsika hamerina ny fihetsika indray sy hiverina indray. Amin'ny rehetra valisoa voajanahary, orgasme no manome ny fanafahana lehibe indrindra amin'ny dopamine sy ny fahatsapana fahafinaretana amin'ny rafitra valanin'ny atidoha. Izany no tetikady lehibe indrindra amin'ny tetikadin'ny natiora mba hitazonana antsika mamokatra sy hamokatra bebe kokoa.
Saingy misy bug ao amin'ny rafitra, raha tsy izany dia ho latsa-pitiavana sy hiaina amim-pifaliana hatrany isika, ary ny mpivarotra mpisolovava dia tsy sahirana loatra.
<< Mpivady mifamatotra Ny Coolidge Effect >>